Ajouter un commentaire - Ny tantaran'ny vary. - Ambohibary, vohitra soa !
Avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra vavy no nitondra ankoholahy sy akoho vavy ka ny akotry tao anaty takorobabon'ny Akoholahy no nangalana ny vary nambolena rehefa nanatody ny akohovavy. AKOTRY no niantsoana ny vary taloha satria takorobabon'ny akoholahy no nangalana azy. VARY kosa no niantsoana azy rehefa navoaka niharihary avy tao amin'ny takorobabon'akoho izy ka nambolena. FOTSIMBARY indray rehefa nendahina ny hodiny, izany...